Broadcast Pix သည်၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ရန် Medialooks MFormats နှင့် WebRTC ကိုရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထုတ်လွှင့် Pix ယင်း၏နောက်မျိုးဆက်ဝေးလံခေါင်သီဖြေရှင်းချက်ပါဝါမှ Medialooks MFormats နှင့် WebRTC ရွေးကောက်
ထုတ်လွှင့် Pix ယင်း၏နောက်မျိုးဆက်ဝေးလံခေါင်သီဖြေရှင်းချက်ပါဝါမှ Medialooks MFormats နှင့် WebRTC ရွေးကောက်
ဘော်စတွန်, MA - အောက်တိုဘာလ 2, 2019 - ထုတ်လွှင့် Pix, ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်ဝေးလံသောပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် streaming များဖြေရှင်းချက်၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, တည်ဆောက်ရန် Medialooks '' MFormats Software Development Kit (SDK ကို) နှင့် WebRTC ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် တပ်မှူး၎င်း၏ဝေးလံခေါင်သီ user interface ကို။
အဆိုပါအသံလွှင့် Pix တပ်မှူးက Chrome, Safari ကသို့မဟုတ် Firefox အတွက်အပြည့်အဝရွေ့လျားမှုဗီဒီယိုထဲမှာကင်မရာနှင့်ဘဏ်ဍာကြည့်ရှုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုသူများအဖွ; မဆိုချိတ်ဆက်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ။ ခလုတ်ထိုကဲ့သို့သော, ကလစ်များလှိမ့်နိမ့်သုံးပုံနှစ်ပုံသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်း, split-screen သက်ရောက်မှုပြသသို့မဟုတ်အဝေးမှစက်ရုပ်ကင်မရာများထိန်းချုပ်အဖြစ်စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းဖို့အသံလွှင့် Pix ရဲ့ထူးခြားတဲ့မီဒီယာ -aware macro, ဖြစ်ပေါ်ဖို့ configured နိုင်ပါတယ်, ဒါ streaming လိုအပ်ချက်များကိုအတော်လေးတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြသည်။
Medialooks စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ထုတ်ကုန်တည်ဆောက်ရန်ရှာကြံ software ကို developer များအဘို့, လျင်မြန်လွယ်ကူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော SDKs တစ်ထင်ရှားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
"2003 ကတည်းကအသံလွှင့် Pix, ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားအော်ပရေတာလိုအပ်အများအပြား devices များနေရာတွင်အစားထိုးကြောင်းဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ရှေ့ဆောင်ကြပါပြီ" ဘင်တေလာ, အသံလွှင့် Pix CTO ဖြစ်သူကရှင်းပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများအတွက်ဝေးလံခေါင်သီ user interface ကိုဖန်တီးလာသောအခါသူတို့၏မြင့်မားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်သောဗီဒီယို SDK ကိုမှကျွန်တော်တို့ကို enabled ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ငါတို့သည်ငါတို့၏မိတ်ဖက်အဖြစ် Medialooks ရှေးခယျြခဲ့ မစိုက်ဖန်တီးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်ချွေတာမီဒီယာကို formats streaming စီမံခန့်ခွဲ - အလှည့်၌အကြှနျုပျတို့၏စျေးကွက်ခဲကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားတဲ့ "!
တေလာအများအပြားဖြေရှင်းချက်အကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ Medialooks ဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါ WebRTCသူကမှတ်ချက်ချ, "ငါသည်ပါဝင်ပတ်သက်အလုပ်စဉ်းစားစတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မ Medialooks WebRTC ဆက်ပြောသည်ဖူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြတ်ပြီးလာသောအခါအကြောင်းဖွင့် - ငါကအလွယ်တကူကျွန်တော်တတျနိုငျသထက်အများကြီးမြန်တစ်ခုကြော့ဖြေရှင်းချက်ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးငွေရေးကြေးရေးနှင့်နည်းပညာပိုင်း, အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအမှုလုပ် အခြားမည်သည့် tools များနှင့်အတူပွုပါပွီ။ "
အောင်မြင်စွာတပ်မှူးအကောင်အထည်ဖော်ပွီးလြှငျ, တေလာသူ့အဖွဲ့ကိုပိုပြီး streaming များကို formats ပေးပေမယ့်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့မသာပြန်ဖွင့်, streaming များနှင့်ဒေသခံမှတ်တမ်းတင် options များချဲ့ထွင်ရန် MFormats နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "ကျနော်တို့နမူနာ applications များများစွာ ယူ. အရင်းအမြစ်အသုံးချကြည့်ရှုခြင်းနှင့် CPU ကိုဝန်နဲ့ memory အသုံးပြုမှုသူတို့ကျနော်တို့ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသော tools များနှင့်အတူရှိသောထက်နည်းများမှာကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်" တေလာ "ကောက်ချက်ချစွမ်းဆောင်ရည်သည်ငါတို့အဘို့တကယ်အရေးပါဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတခြားဒေသများရှိအသုံးပွုဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့် Pix ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Medialooks MFormats လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် WebRTC 2019-10-04
ယခင်: အနီရောင်ဧရာ Thrones VFX သင်ခန်းစာစီးရီး၏ဂိမ်းမှ Epic Finish ကိုဦးလွတ်မြောက်: နဂါး
နောက်တစ်ခု: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & ပရိုဖိုင်း: Dan Rayburn